တသက်လုံးရပ်တည်နိုင်မယ့် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရန် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ? – FemaleWear.net
တသက်လုံးရပ်တည်နိုင်မယ့် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရန် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
FASHION ဆိုတာနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်နာမည်ကြီး ကျော်ကြားလာတဲ့ ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခေတ်နဲ့ တခေတ် trend ဖြစ်နေတဲ့ ဖက်ရှင်တွေမတူညီပေမယ့် အလှည့်ကျလည်ပတ်နေတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဖက်ရှင်မျိုးကိုမှ လစ်လျူရှု့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဖက်ရှင် trend တစ်မျိုးတည်း နောက်ကိုသာ လိုက်နေလို့ မရပါဘူး။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတွက် အသက်ရွယ်မရွေး ဖက်ရှင်တွေကို မျက်စိဖွင့် နားစွင့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အသက်သာ ကြီးသွားရင် ကြီးသွားပါစေ။ အမြင်တွေ အတွေးတွေကို တသက်မှတ်တည်း သွားလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း အမြဲသတိထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် အမြဲရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဖန်တီးပေးရမယ့် artist ရဲ့ အကြောင်းကို သိဖို့လိုပါတယ်။ သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံဆင်မြန်းလိုက်ရင် unique ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာရယ် သူဟာ ကဖို့အတွက်ဝတ်ဆင်မှာလား? တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေပြီး ဝတ်ဆင်မှာလား? ဆိုတာရယ်ကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင် တစ်ခုမှာ သူများဒီဇိုင်းကို inspired ယူပြီးဖန်တီးတာထက် ကိုယ်ပိုင်တည်ထွင်တာမျိုးက artist အတွက်ရော ဒီဇိုင်နာအတွက်ပါ image ကို ပိုပြီးကောင်းစေပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်လို့ ဆိုလိုက်ကတည်းက ကိုယ်တိုင်တီထွင်ဖန်တီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းကိုတော့ ကောင်းကောင်းဆွဲတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Drawing Skills ကမဝတ်ဆင်သေးခင်မှာတောင် ကိုယ့်ရဲ့ customer ကို ဆွဲဆောင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Fashion တစ်ခုအတွက် Drawing Skills ကလည်း မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနာကောင်းတစ်ယောက်မှာ Drawing Skills ကလည်း အရေးကြီးသလို ကိုယ်ဖန်တီးမယ့် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကို အသေးစိတ်မျက်စိနဲ့ မြင်တတ် ကြည့်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ- သင်ဖန်တီးမယ့် skirt or blouse ရဲ့ ခါးနားမှာ အမွေးအတောင်တွေ ထည့်လိုက်ရင်ပိုပြီး unique ဖြစ်မလား ပန်းပွင့်တွေထည့်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမလားဆိုတာကို စဉ်းစားတတ်ဖို့ လိုသလို overlook ကြီးဖြစ်မသွားဖို့လည်း သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်ဖန်တီးချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို ပုံဆွဲကြည့်ပြီး အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် Drawing Skills ကောင်းကောင်းက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်။
ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့အတွက် သင့်ရဲ့တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းက အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ဖန်တီးမယ့် အင်္ကျီစရဲ့ အရောင်နဲ့ ဒီဇိုင်းက လိုက်ဖက်မှုရှိရဲ့လား? ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းကရော ကိုယ့်ရဲ့အင်္ကျီစနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိနိုင်ပါ့မလား? ဆိုတာမျိုးတွေကို တွေးခေါ်နိုင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာဆိုပြီး ဖန်တီးချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးလို့လည်း မရသေးပါဘူး။ လက်ရှိဖက်ရှင်လောကမှာ ဘယ်လိုဒီဇိုင်းတွေ trend ဖြစ်နေလဲ? ဘယ်လိုအင်္ကျီစမျိုးတွေ လူကြိုက်များနေလဲ? လူကြိုက်များနေတဲ့ အရာတွေကို ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးတွေ ဖန်တီးပြနိုင်သေးလည်း ဆိုတာမျိုးကို ချပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ဟာနာမည်ကြီးဒီဇိုင်းနာတစ်ယောက်အနေနဲ့ တသက်စာရပ်တည်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Communication Skill နဲ့ personal Skill ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးမှာမဆို လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ skill တစ်ခုပါ။ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်မှာ ဒီလို skill မျိုးပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကို နာမည်ကြီး Brand တွေနဲ့ collaboration လုပ်ပြီး ဖက်ရှင်အမြင်ခြင်း ဖလှယ်ပြီး ဖန်တီးမှုတွေလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Professional ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဟာ ဒီဇိုင်းတွေချည်း ဖန်တီးတတ်နေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ စီးပွားရေးအမြင်ပါ ရှိဖို့်လိုအပ်ပါသေးတယ်။ product တစ်ခုအတွက် ကမ္ဘာ့ fashion လောကရဲ့ marketing တွေ sales တွေအကြောင်းကိုပါ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင်တော့ fashion designer တော်တော်များများမှာ ဒီအလုပ်ဟာ သူတို့ရဲ့ဘဝတသက်တာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖို့အတွက် မလုံလောက်တော့တဲ့ အခြေနေမျိုးတွေကြုံတွေ့လာရပြီး စွန့်လွှတ်လိုက်ရတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေကြလို့ပါ။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အပြိုင်အဆိုင်တေ များနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ သူများနောက်ကမလိုက်ချင်ဘဲ Fashion လောကကို ဦးဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေကို သူများတွေထက်သာတဲ့ အသစ်သစ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Fashion လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးသူဟာ သင်ဘဲဖြစ်ပါစေ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ fashion industry တစ်ခုမှာ သင့်ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေဟာ အမြဲတက်ကြွပြီး မျက်ခြေမပျက်ဖို့က အဓိကအရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။